ကိုကြီး နှင့် ညီမလေး - Dr Mg Nyo [အပြာစာပေ]
ကျွန်မတို့ မိန်းကလေးတွေဟာ ပျှမ်းမျှအားဖြင့် အသက် (၁၃)၊ (၁၄)နှစ်လောက်မှာ ရာသီသွေးစပေါ်ပြီး အပျိုဖေါ်ဝင်ကာစ ဖြစ်ပါတယ်။ အစပထမမှာ လစဉ် မမှန်သေးပေမယ့် ပျောက်လိုက်ပေါ်လိုက်နဲ့ အစပြုပြီး နောက်ပိုင်းမှာ လစဉ်မှန်သွားပါတယ်။ ဒီလို ရာသီသွေးစပေါ်ပြီး အပျိုဖေါ်ဝင်ပြီဆိုတာနဲ့ ကျွန်မတို့ မိန်းကလေးတွေရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ထဲက ဟိုမုန်းဓါတ်တွေ ဖွံ့ဖြိုးပြောင်းလဲမှုကြောင့် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ နှစ်မျိုးစလုံးမှာ ပြောင်းလဲမှုများ သိသိသာသာဖြစ်ပေါ်လာပါတော့တယ်။
အချစ်စိတ်ဆိုတာလည်း အဲဒီအချိန်ကစပြီး ကျွန်မတို့ရဲ့ စိတ်ထဲမှာစ၍ သန္ဓေတည်ခဲ့ရပါတယ်။
ငယ်စဉ်ကလေးဘဝတုန်းက မိန်းကလေးသဘာဝ လှချင်ပချင်တာ ရှိခဲ့ပေမယ့် အပျိုဖြစ်လာတာနဲ့ ကိုယ့်ရဲ့အလှအပတွေကို ဆန့်ကျင်ဘက် လိင်ယောင်္ကျားလေးတွေ သတိထားမိစေချင်တယ်။ ကိုယ့်ရဲ့အလှအပကို ယောင်္ကျားလေးတွေ မြင်စေချင်တယ်။ ဂရုတစိုက် ရှိစေချင်လာပါတယ်။ ဒီအချိန်မှာဘဲ ကျွန်မတို့ မိန်းခလေးတွေရဲ့ စိတ်ထဲမှာ ယောင်္ကျားလေး တစ်ဦးတစ်ယောက်ကို စွဲလန်းတာမျိုး အဲဒီယောင်္ကျားလေးနဲ့ အတူ အနားမှာရှိနေတာ ရင်ထဲမှာ ကြည်နူး ကျေနပ်နေရတာမျိုးတွေကနေစပြီး အဲဒီယောင်္ကျားလေးကနေ ကိုယ့်ကိုလာပြီး ထိတာကိုင်တာ၊ နမ်းတာမျိုးတွေကို လိုလိုလားလား ဆန္ဒတွေ ဖြစ်ပေါ်လာတတ်ပါတယ်။
ဒီကနေစပြီး ကျွန်မတို့ မိန်းကလေးတွေဟာ ရည်းစားတွေ ထားကြပြီး ကာမမှုကို ရှေးရှုလာပါတော့တယ်။ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပြောင်းလဲမှုတွေမှာလည်း ဒီအချိန်မှာ မိန်းမတစ်ယောက်ရဲ့ အင်္ဂါရပ်တွေ ပြည့်စုံလာပြီဆိုတော့ သွေးသားတွေ ဆူဖြိုးထကြွလာတာကလည်း မဆန်းလှပါပေ။ အခုဆိုလျှင် စိမ်းလဲ့ခင် လို့ခေါ်တဲ့ ကျွန်မအသက်ဟာ (၂၀) နှစ် ပြည့်ပြီးသွားပါပြီ။ အိမ်မှာတော့ မိစိမ်းလို့ပဲ ခေါ်ကြပါတယ်။
ကျွန်မက ရတနာပုံတက္ကသိုလ်မှာ (….) ဒုတိယနှစ် ဖြေပြီးပါပြီ။ အခုနှစ်တော့ ကိုဗစ်ဖြစ်နေတာကြောင့် ကျောင်းတွေ ပိတ်ထားလို့ အိမ်မှာပဲ နားနေရပါတယ်။ ဒီအချိန်ထိတော့ ကျွန်မမှာ ရည်းစားချစ်သူရယ်လို့ မရှိသေးပါဘူး။ ကျွန်မက အနေအေးတာလဲ ပါတာပေါ့ရှင်။ ပြီးတော့ ကျွန်မက ယောက်ျားလေးတွေကို မယုံဘူး။ ရည်စားထားပြီး ဗိုက်ကြီးတာတွေ ဖျက်ချတာတွေက နားနဲ့မဆန့်အောင် ကြားနေရတာလေ။ ရည်းစားလေး ထားမိပါတယ် မယုံရတဲ့သူဆိုရင် အတင်းလုပ်သွားမှာလေ။ အဲဒါကြောင့်ပဲ ရည်းစားမထားပဲ နေခဲ့တာပါ။
ဒါပေမဲ့ တစ်နေ့မှာတော့ အဲဒီ တစ်နေ့လေး အကြောင်းကို ကျွန်မပြောပြပါမယ်။
ကျွန်မတို့ အိမ်က နှစ်ထပ်အိမ်ပါ။ အပေါ်ထပ်မှာက အမေ့ရဲ့ အစ်မကြီးတို့ သားအမိနေပြီး အောက်ထပ်ကတော့ ကျွန်မတို့ နေပါတယ်။ ကြီးဒေါ်ရဲ့ အပေါ်ထပ်ကို အိမ်ဘေးက လှေခါးကနေ တက်ရပြီး သူတို့ လှေခါးခြေရင်းနဲ့ ကျွန်မတို့ အိမ်အောက်ထပ် ဝင်ပေါက်နဲ့က ကပ်နေတယ်။
ကြီးဒေါ်ရဲ့သား ကျွန်မ အစ်ကို ဝမ်းကွဲက (…..) အလုပ်လုပ်ပါတယ်။ နာမည်က ဇော်ဖြိုး လို့ ခေါ်ပြီး အသက်က (၃၄) နှစ်လောက်ရှိနေပြီ။
ကျွန်မ အမေက အိမ်ဆိုင်လေး ဖွင့်ထားပြီး အဖေကတော့ အရောင်းဝယ် လုပ်တာမို့ အမြဲလိုလို အိမ်မှာ မရှိပါဘူး။ အမေကလဲ ဆိုင်ထဲမှာပဲ ဈေးရောင်းနေတော့ အိမ်မှာက ကျွန်မ တစ်ယောက်ထဲပါပဲ။
တစ်နေ့ကြတော့ ညနေမှောင်စပျိုးနေတဲ့ အချိန်မှာ ရေချိုးပြီးလို့ အိမ်ဝင်ပေါက် ထွက်ပေါက်ဘေးမှာ ထောင့်ဖြတ်လေးထိုင်ပြီး လမ်းပေါ်ကို လှမ်းငေးကြည့်နေလိုက်ပါတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာပဲ အပေါ်ထပ်လှေခါးကနေ အကိုကြီးဇော်ဖြိုးက အောက်ဆင်းလာပါတယ်။ ရေချိုးမလို့ ဆင်းလာတာပါ။ ဘာရယ်မဟုတ်ဘူး ကျွန်မလဲ ကိုကြီးကို ကြည့်လိုက်ရင်း အမှတ်မထင် ကိုကြီးရဲ့ ပေါင်ကြားနေရာကို ကြည့်လိုက်တော့ ရှေ့ကို ထိုးထွက်နေတဲ့ အရာကြီးကို တွေ့လိုက်ရပါတယ်။ အဲဒါက ယောက်ျားတစ်ယောက်ရဲ့ လီးတန်ကြီးဆိုတာ သိလိုက်ရတော့ ကျွန်မ စိတ်တွေက ဖျက်ကနဲ လှုပ်ရှားသွားရပါတယ်။
“ဟင် ကိုကြီးလီးကြီးက တောင်နေပါလား အကြီးကြီးပဲ” လို့ တွေးရင်း ကျွန်မစောက်ဖုတ်ထဲက လှိုက်ကနဲနဲ့ ယားသွားပြီး စောက်ရည်လေးတွေ စိမ့်ထွက်လာပါတယ်။ ဒီလိုပြောလို့ ကျွန်မကို ယွလွန်းတယ်လို့ ပြောရင်တော့ မိန်းကလေးတိုင်း ဒီလိုပဲလို့ ပြောရမှာပါပဲ။
ဟုတ်တယ်လေ မိန်းကလေးတွေက ယောက်ျားလေးရဲ့ လီးတွေကို တွေးပြီး အာသာဖြေတက်ကြတာက ထုံးစံပဲလေ။ ကျွန်မလဲ မိန်းကလေးပဲဆိုတော့ ရည်းစားမထားဖူးပေမဲ့ တစ်ကိုယ်ရည် အာသာတော့ နေ့စဉ်လိုလို ဖြေဖျောက်မိတာပေါ့။ ကိုကြီးလဲ ပျောက်သွားရော ကျွန်မလဲ အခန်းထဲကို ဝင်ပြီး ကုတင်ပေါ်ကို ပက်လက်လေးလှန်ပြီး အဖုတ်လေးကို ပွတ်နေမိပါတော့တယ်။
စိတ်ထဲမှာတော့ စောစောက မြင်လိုက်ရတဲ့ ပုဆိုးအောက်က ထောင်ထနေတဲ့ ကိုကြီးရဲ့ လီးကြီးကို မြင်ယောင်နေတာပေါ့။ ကိုကြီးရဲ့ လီးကြီးကို မြင်ယောင်ရင်း ကျွန်မလဲ လက်ညှိုးလေးကို အဖုတ်ထဲကို သွင်းလိုက်ပါတယ်။ အရမ်းကောင်းတာပါပဲရှင်။တကယ့် လီးအစစ်မ ဟုတ်ပဲ စိတ်မှန်းနဲ့ လုပ်တာတောင် ဒီလောက်ကောင်းနေရင် ကိုကြီးရဲ့ လီးကြီးနဲ့များ အလိုးခံလိုက်ရရင်တော့ ဘယ်လောက်များကောင်းလိုက်မလဲ လို့ တွေးနေမိပါတယ်။
အဲဒီညနေကတော့ ကျွန်မလဲ ကိုကြီး လီးကြီးကို မှန်းပြီး လက်နဲ့ လုပ်လိုက်တာ စောက်ရည်တွေကို တအားထွက်ပြီး တစ်ကိုယ်လုံး မောသွားတာပဲရှင်။ နောက်နေ့ မနက်ရောက်တော့ ကျွန်မရဲ့ စိတ်တွေက ကိုကြီးအပေါ်ကို အရင်ကလို မောင်နှမ တစ်ဝမ်းကွဲဆိုတဲ့ အမြင်မရှိတော့ပါဘူး။ မြင်လို့လဲ မရတော့ဘူး။ ကျွန်မ ကိုကြီးကိုချစ်မိသွားပြီလေ ကိုကြီးရဲ့ ချစ်သူလေးလုပ်ပြီး ကိုကြီးနမ်းတာကို ခံချင်လာတယ်။ ကိုကြီးရဲ့ လီးကြီးကိုလဲ ကိုင်ကြည့်ချင်လာတယ်။ ကျွန်မနို့လေးတွေကိုလဲ ကိုကြီးကို ကိုင်စေချင်လာတယ်။ အဖုတ်လေးကိုလဲ ကိုကြီးကို ယက်ခိုင်းချင်လာတယ်။ ကိုကြီးရယ် ကျွန်မကို ကိုကြီးလုပ်ချင်သလိုသာ လုပ်ပါတော့လို့ တွေးမိနေပါတော့တယ်။
ကျွန်မရဲ့ အဖုတ်လေးကလဲ ကိုကြီးကိုမြင်တိုင်း ယွတက်နေပြီး အရည်လေးတွေကလဲ စိုရွှဲနေတာပါပဲရှင်။ စိတ်တွေက မနေနိုင်လွန်းလာတော့ ကျွန်မလဲ ကိုကြီးကို မိန်းမတို့တတ်အပ်တဲ့ ပညာတွေ သုံးလိုက်တော့တာပေါ့။
မိသားစုနှစ်ခုလုံးက ရေချိုးတဲ့နေရာက အတူတူပဲဆိုတော့ နေ့လည်ရောက်တော့ ကျွန်မရေချိုးဖို့ ရေကန်ရှိရာကို သွားလိုက်ပါတယ်။ ရေချိုးတဲ့ နေရာက ကိုကြီး အခန်းကနေကြည့်ရင် ထက်အောက် တန်းနေတာမို့ ကျွန်မလဲ သီချင်းလေးဆိုနေလိုက်ရင်း မျက်လုံးလေးနဲ့ ကိုကြီးအခန်းရှိရာကို မသိမသာလေး ကြည့်လိုက်ပါတယ်။
ကိုကြီးလေ ကျွန်မရေချိုးဖို့ ပြင်တာကို ကြည့်နေတာတွေ့ရတော့ ကျွန်မလဲ ရင်ရှားထားတဲ့ ထဘီလေးကို အောက်နဲနဲ လျှောချပြီး ပြင်ဝတ်လိုက်ရင်း နို့တွေကို ပြလိုက်ပါတယ်။ ကိုကြီးရှိရာကို လှမ်းမကြည့်တော့ပေမဲ့ ကြည့်နေမယ်ဆိုတာ သိတယ်လေ။ ကျွန်မလဲ ကိုကြီးကို အမျိုးမျိုး လုပ်ပြနေရင်း အခုနေဆို ငါ့ကိုကြည့်ပြီး ကိုကြီးလီးကြီးက တောင်နေမှာပဲ လို့ တွေးမိတော့ ကျွန်မအဖုတ်လဲ စောက်ရည်လေးတွေ စိမ့်ထွက်လာတာပေါ့ရှင်။ လက်ညှိုးလေးကို ကိုကြီးလီးအမှတ်နဲ့ အဖုတ်ထဲကို ထိုးသွင်းချင်ပေမဲ့ ကိုကြီးကြည့်နေတာဆိုတော့ အဲလောက်ထိတော့ ကျွန်မ မရဲဘူး ဖြစ်နေတယ်။
ရေချိုးပြီးလို့ ပြန်လာတော့ ကိုကြီးက အိမ်ပေါ်ကနေ ဆင်းလာတာကို တွေ့လိုက်ရတော့ ကျွန်မလဲ စိတ်ထဲကနေ ပြုံးလိုက်မိပါတယ်။ ကျွန်မပြတာတွေကြည့်ပြီး လီးကြီးတောင်နေလို့ ကျွန်မဆီလာတာဆိုတာ သိတာပေါ့။ အဲဒါကြောင့်လဲ ကျွန်မကနေပဲ ကိုကြီးကို စကားစပြောလိုက်ပါတယ်။
“ကိုကြီး ရေမချိုးသေးဘူးလား မချိုးသေးရင် ညီမလေး အခန်းထဲက အဝတ်တန်း ပြုက်ကျနေလို့ ရိုက်ပေးဦးနော်”
“အေး အေး ရိုက်ပေးမယ်လေ အခုလား မိစိမ်း”
လို့ ကျွန်မလဲပြောပြီး ရှေ့ကနေ ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ရေစိုနေလို့ ထဘီလေးက ကိုယ်လုံးလေးမှာ ကပ်နေပြီး ဖင်လေးပေါ်လဲ ကပ်နေမယ်ဆိုတာ သိလို့ ကိုကြီး ကြည့်ရအောင် ကျွန်မက ရှေ့ကနေ သွားပြလိုက်တာပါ။ ရေစိုထဘီလေးက ဖင်အကွဲကြောင်းလေး ပေါ်အောင်ကို ကပ်နေမှာဆိုတော့ ကိုကြီးကြည့်ပြီး စိတ်တွေ ထနေမှာ သေချာပါတယ်။
အခန်းထဲရောက်တော့ ကျွန်မလဲ ရေမချိုးခင်က ကြိုတင်ပြီး ဖြုတ်ထားတဲ့ အဝတ်တန်းကို ကိုကြီးကို ရိုက်ခိုင်းလိုက်ပါတယ်။ အဝတ်တန်း ရိုက်နေရင်း ကိုကြီးက ကျွန်မကို မသိမသာ ကြည့်နေတာကို မသိသလိုပဲနေပြီး ထဘီလဲလိုက်ပါတယ်။
ထဘီလဲပြီးတော့ အတွင်းခံဘောင်းဘီလေး တစ်ထည်ကို ကိုကြီးရှေ့မှာပဲ ယူပြီး ဖြန့်ကြည့်လိုက်ရင်း ကိုကြီးကို ဖျက်ကနဲ ကြည့်လိုက်တော့ ကိုကြီးလေ ကျွန်မ အတွင်းခံ ဘောင်းဘီလေးကို စိုက်ကြည့်နေတာ တွေ့လိုက်ရပါတယ်။ ကျွန်မလဲ ကိုကြီးက အတွင်းခံဘောင်းဘီလေးတွေကို ကြိုက်တဲ့ စိတ်ရှိလို့ နေမယ်ဆိုပြီး ကိုကြီးကို ပြောလိုက်ပါတယ်။
“ကိုကြီး ဒီအရောင်လေး လှလားဟင် ညီမလေးက ပန်းရောင်ထက် အသားရောင် ပိုကြိုက်တာ”
“လှပါတယ် ပန်းရောင်က မိစိမ်းနဲ့ဆို ပိုလိုက်တယ် အရမ်းလှမှာပဲ “
“ဟုတ်လား ညီမလေးက ပန်းရောင်နဲ့ မလိုက်ဘူးထင်နေတာ အဲဒါဆိုရင် မနက်ဖြန်ကြရင် ဈေးသွားဝယ်မယ် ကိုကြီး လိုက်ပို့နော်”
“အေးပါ လိုက်ပို့မယ် မိစိမ်း ကိုကြီးလဲ ဝယ်စရာလေးရှိလို့”
စကားပြောနေကြရင်း ကျွန်မလဲ ကိုကြီးကို ကျောလေးပေးပြီး ထဘီလေးကို ပါးစပ်ကနေကိုက်ပြီး ခြေထောက်ကနေ ဘောင်းဘီလေးကို ဝတ်လိုက်ပါတယ်။ အပေါ်ဆွဲတင်ပြီးတော့ ကိုကြီးကို ကြည့်လိုက်တော့ ပေါင်ကြားက လီးကြီးက ထိုးထောင်ပြီးထွက်နေတာကို တွေ့လိုက်ရပါတယ်။ ကိုကြီးရယ်…ညီမလေးလေ ကိုကြီးလီးကြီးကို မြင်ရရင် မနေနိုင်အောင်ပါပဲရှင် အဲဒီလီးကြီးကို ညီမလေး စုပ်ချင်လိုက်တာလို့ စိတ်ထဲကနေ ပြောနေမိပါတော့တယ်။
နောက်နေ့ မနက်ရောက်တော့ ကျွန်မလဲ ကိုကြီးကိုခေါ်ပြီး ဈေးကိုသွားလိုက်ပါတယ်။ ဆိုင်ကယ်ပေါ်မှာ ကိုကြီးခါးကို တင်းနေအောင်ဖက်ရင်း လိုက်သွားတာပေါ့။ လမ်းက မကောင်းလို့ ချိုင့်ထဲ ဆိုင်ကယ်က ကျသွားလို့ ခုန်သွားရင် ကျွန်မလဲ နို့လေးတွေနဲ့ ကိုကြီးကျောကို မသိမသာလေး ပွတ်နေလိုက်ပါတယ်။ရင်လေးတွေ ခုန်နေရင်း ဈေးကို ဘယ်လိုရောက်သွားတယ်ဆိုတာကို မသိအောင်ပါပဲရှင်။
ဈေးရောက်မှပဲ သတိဝင်လာပြီး ဝယ်မဲ့ဆိုင်ကို ကိုကြီးနဲ့ အတူတူ လာလိုက်ကြပါတယ်။ ကိုကြီးက ကျွန်မလက်လေးကို ကိုင်လိုက်တော့ ကျွန်မလဲ အလိုက်သင့်ပဲ ပြန်ကိုင်ထားလိုက်ပါတယ်။ စိတ်ထဲကတော့ ကိုကြီးနဲ့များ ချစ်သူတွေ ဖြစ်သွားကြရင် အခုလိုပဲ လက်ချင်းတွဲပြီး လျောက်လည်ပစ်လိုက်မယ်လို့ စိတ်ကူးနေလိုက်ပါတယ်။
ဝယ်မဲ့ဆိုင် ရောက်တော့ အတွင်းခံ (၃)ထည် ဝယ်လိုက်ပါတယ်။ ကိုကြီးကြိုက်တဲ့ ပန်းရောင်လေးက (၂) ထည် ကျွန်မကြိုက်တဲ့ အသားရောင်လေးက (၁) ထည်ပေါ့။ အိမ်ပြန်မလာခင် ကိုကြီးနဲ့ ရေခဲမုန့်ဝင်စားကြရင်း ကိုကြီးက သူ့ထဲက အသီးလေးတွေကို ကျွန်မထဲကို ထည့်ပေးတော့လဲ ကြည်နူးလိုက်တာရှင်။ ကိုကြီးလဲ ငါ့ကို ချစ်နေတာပဲ လို့ တွေးရင်း ရင်ထဲမှာ တစ်သိမ့်သိမ့်နဲ့ ခုန်နေရပါတယ်။ ပြန်လာတဲ့ အခါမှာတော့ အသွားတုန်းကထက်ပိုပြီး ကိုကြီးကို ဖက်ထားလိုက်ပါတယ်။ ကိုကြီးဆီကရတဲ့ ယောက်ျားရနံ့ကလဲ ကျွန်မစိတ်တွေကို ယစ်မူးနေအောင် ပြုစားနေတာပေါ့။
နောက်ရက်တွေမှာတော့ ကျွန်မနဲ့ ကိုကြီးရဲ့ ရင်းနှီးမှုက အရင်လို မဟုတ်တော့ပါဘူး။ ကိုကြီး ကျွန်မကို ကြည့်တဲ့ အကြည့်တွေက ဘာဆိုတာ ကျွန်မသိသလို ကျွန်မကြည့်တဲ့ အကြည့်တွေကိုလဲ ကိုကြီးက နားလည်သိရှိနေပါပြီ။ မကြာခဏလဲ မျက်လုံးချင်းစုံပြီး ကြည့်ကြပါတယ်။ ကြည့်တိုင်းလဲ တော်တော်နဲ့ အကြည့်ချင်း မခွာကြပါဘူး။ ကြာလာတော့ တစ်ယောက် ရင်ထဲကို တစ်ယောက်က ဝင်ကြည့်သလို နားလည်နေပါပြီ။ ဒါပေမဲ့လဲ မောင်နှမ တစ်ဝမ်းကွဲဆိုတဲ့ အသိက ကျွန်မတို့ကြားမှာ ကာဆီးထားလို့နေပါတယ်။
ကိုကြီးကတော့ အကြီးဆိုတော့ သူကစရင် သူ့အပြစ် ဖြစ်နေမှာစိုးလို့ မစရဲတာ နေမှာလို့ ကျွန်မတွေးမိတော့ ကျွန်မကပဲ စဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတော့တယ်။ ကျွန်မက စဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်တာနဲ့ အစီအစဉ် ဆွဲလိုက်ပါတယ်။ ဘယ်လို စမလဲပေါ့။ နောက်ဆုံးတော့ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ အိန္ဒြေလည်း မပျက်အောင် ကိုကြီးလဲ သိအောင်ဆိုပြီး ကိုကြီးကြိုက်တဲ့ အတွင်းခံဘောင်းဘီ ပန်းရောင်လေးကိုဝတ်ပြီး ကိုကြီးရှေ့မှာ ထဘီလေးကို မသိမသာလေး လျှောချပြီး ဝတ်ပြလိုက်ပါတယ်။
ကျွန်မရဲ့အဖုတ်က တခြားမိန်းကလေးတွေထက် ပိုပြီး ဖောင်းနေတော့ အတွင်းခံလေးပေါ်ကနေကြည့်ရင် ဖောင်းဖောင်းလေး ဖြစ်နေပါတယ်။ အဲဒါကို ကိုကြီးမြင်အောင် ပြချင်တာဆိုတော့ ထဘီလေးကို ခပ်ကြာကြာလေး အချိန်ဆွဲပြီး မျက်နာလေးကို ဘေးလွဲပြီး ဝတ်ပြလိုက်ပါတယ်။ ထဘီလေးကိုလဲ အောက်ကို အတော်လေးလျောချပြီး ဝတ်ပြလိုက်ပါတယ်။ ဒါမှ ကိုကြီးက ကျွန်မ အဖုတ် ဖောင်းဖောင်းလေးကို မြင်ရမှာလေ။
အဲလိုဝတ်ပြရင်း ကျွန်မစိတ်တွေက အရမ်းကို လှုပ်ရှားနေတာပေါ့။ ကိုကြီးကြည့်ရအောင် ပြနေရတော့ ပြတဲ့ ကျွန်မရော ရင်တွေ အရမ်းခုန်နေပြီး စောက်ရည်တွေ စိမ့်ထွက်နေရတာပေါ့။ ကိုကြီး လီးကြီးကလဲ တအားကို တောင်နေတာပဲရှင် ပုဆိုးထဲကကို ထိုးထွက်နေတာပဲ။ အဲလို ပြပြီးတိုင်း ကျွန်မလဲ အခန်းထဲကို ပြေးရပါတယ်။ မနေနိုင်တော့လောက်အောင်ကို အဖုတ်က ယားပြီး ယွနေလို့လေ။
အဲလိုအချိန်မှာ ကိုကြီး လီးကြီးကို မြင်ယောင်ပြီး လက်ညှိုးနဲ့ ထိုးရတာက အရမ်းကောင်းတာပဲရှင်။ လက်ညှိုးကို ကိုကြီးလီးအမှတ်နဲ့ ထိုးနေရင်း တခါတလေများဆိုရင် အားမရလို့ လက်ခလည်နဲ့ တအားစောင့်ထိုးနေမိတာပေါ့။ စိတ်ထဲကတော့ ကိုကြီးလီးကြီးနဲ့ အလိုးခံနေတယ်လို့ မှန်းပြီးလုပ်နေတာပေါ့ရှင်။ ခံစားရတဲ့ အရသာကတော့ ပြောမပြတက်အောင်ကိုပါပဲ စောက်ရည်တွေများဆိုရင် ရွှဲနေတာပဲ။
ပြီးသွားလို့ ထွက်လာတဲ့ စောက်ရည်တွေကို ကိုကြီးကြိုက်တဲ့ ပန်းရောင် အတွင်းခံလေးနဲ့ သုတ်လိုက်ရင်း စောက်ရည်တွေ စိုနေတဲ့ အတွင်းခံလေးကို ကိုကြီးမြင်အောင် ပြချင်လာပါတယ်။ ဒါနဲ့ပဲ ကျွန်မလဲ ရေးချိုးမလို လုပ်ပြီး အတွင်းခံလေးကို ရေကန်မှာ ချထားလိုက်ပြီး တခုခု မေ့သလိုမျိုး အခန်းကိုပြန်လာလိုက်ပါတယ်။ ပြန်မလာခင်တော့ ကိုကြီးကို စကား လှမ်းပြောလိုက်ပါတယ်။ အခန်းထဲရောက်မှ အပေါက်ကနေ ချောင်းကြည့်နေလိုက်တော့ ခဏနေတော့ ကိုကြီးက ဆင်းလာပြီး မရဲတရဲနဲ့ ကျွန်မချထားတဲ့ စောက်ရည်တွေ စိုရွှဲနေတဲ့ အတွင်းခံဘောင်းဘီကို ကိုင်ကြည့်နေတာ တွေ့လိုက်ရပါတယ်။
ကိုင်ကြည့်နေရင်း ကိုကြီးက အတွင်းခံလေးကို ဖြန့်ကြည့်ပြီး နမ်းလိုက်ပါတယ်။ ပြီးတော့ ကျွန်မပြီးသွားလို့ ထွက်ထားတဲ့ စောက်ရည်တွေကို လျှာနဲ့ယက်နေတာကို တွေ့လိုက်ရပါတယ်။ ကျွန်မလေ ကိုကြီးက ကျွန်မစောက်ရည်တွေကို ယက်နေတာမြင်ရတော့ စိတ်ထဲမှာ အရမ်းကျေနပ်မိတာပဲ။ အဖုတ်လေးထဲကလဲ လှိုက်ကနဲနဲ့ ယွတက်လာပါတယ်။
ကိုကြီးရယ်… ညီမလေးကို အရမ်းကိုချစ်လို့ စောက်ရည်တွေကို ယက်နေတာပေါ့နော် လို့ ပြောနေမိပါတယ်။ ကိုကြီး ယက်ချင်တဲ့ စောက်ရည်တွေကို ညီမလေး ပေးယက်ပါ့မယ် ညီမလေးအဖုတ်ကို ကိုကြီးယက်ပေးပါတော့ ထွက်လာတဲ့ စောက်ရည်တွေကို ကိုကြီးစိတ်ကြိုက် ယက်နေပါလို့ စိတ်ထဲကနေ ပြောနေမိပါတော့တယ်ရှင်။
အချိန်တွေ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ ကုန်လာတာနဲ့အမျှ ကိုကြီးနဲ့ ကျွန်မနဲ့က မောင်နှမ တစ်ဝမ်းကွဲလဲမက ချစ်သူတွေလဲမကျ ဖြစ်နေကြပါပြီ။ ကိုကြီးက ကျွန်မခါးလေးကို ဖက်လာရင် ကျွန်မက ကြည်ကြည်ဖြူဖြူနဲ့ အဖက်ခံသလို ပါးလေးကို နမ်းရင်လဲ ပြုံးပြီးတော့ အနမ်းခံနေလိုက်ပါတယ်။ တခါတလေကြရင်လဲ ဂါဝန်လေးဝတ်ပြီး ကိုကြီးရှေ့မှာ ကုန်းပြလိုက်ပါတယ်။ ဂါဝန်လေးကပါးတော့ ကိုကြီးကြည့်ရင် အောက်က အတွင်းခံအရာလေးနဲ့ အတွင်းခံလေးကို ကိုကြီးမြင်နေရမယ်ဆိုတာ သိတော့ ဂါဝန်ပါးပါးလေးတွေဝတ်ပြီး ကိုကြီးရှိရာကို မယောင်မလည် လုပ်နေလိုက်ပါတယ်။
အဲလိုအခါမျိုးဆိုရင် ကိုကြီးက ကျွန်မ ဖင်လေးကို ကြည့်နေတော့တာပါပဲ။ ကျွန်မကလဲ ကိုကြီးကို ကြည့်စေချင်တာဆိုတော့ ကိုကြီးရှေ့မှာပဲ မျက်နှာလေးကို ဘေးလွှဲပြီး ဂါဝန်လေးကို ဒူးလေးပေါ်အောင် မတင်လိုက် ကုန်းလိုက် လုပ်ပြနေလိုက်တာပေါ့။ ကိုကြီးက ကျွန်မအဖုတ်လေးရှိတဲ့ ပေါင်ကြားနေရာလေးကိုလဲ ကြည့်နေလေ့ရှိပါတယ်။
အဲလို ကိုကြီးက ကြည့်နေပြီဆိုရင် ကျွန်လဲ ယားလို့ကုပ်တာလိုလိုနဲ့ ပေါင်လေးကို ပွတ်လိုက် ပေါင်ကြားက အဖုတ်လေးကို ပွတ်လိုက်နဲ့ လုပ်ပြနေလိုက်ပါတယ်။ မျက်နာလေးကတော့ ဘေးကို လွဲထားတာပေါ့။ တချက်ချက် မျက်လုံးကို ထောင့်ကပ်ပြီး ကြည့်လိုက်ရင်တော့ ကျွန်မ လုပ်ပြတာတွေကို ကိုကြီးတစ်ယောက် ကြည့်နေတယ် လီးကြီးတောင်နေတယ် ဆိုတာတော့ သိရပါတယ်။
ကျွန်မက တစ်ဝမ်းကွဲ အကိုကြီးကို ဒီလိုတွေ လုပ်ပြနေတာက ကိုကြီးကို ယုံလို့လေ။ ကိုကြီးက ကျွန်မကို ထိခိုက်နစ်နာအောင် မလုပ်ဘူးဆိုတာ သိနေလို့လေ။ တစ်ဝမ်းကွဲ ညီမဖြစ်တဲ့ ကျွန်မကို ညီမလေးလိုရော ချစ်သူတစ်ယောက်လိုရော ချစ်နေတယ်ဆိုတာ သိနေလို့ စိတ်ချယုံကြည်ပြီး လုပ်ပြနေတာပါ။ကျွန်မနဲ့ ကိုကြီးက မောင်နှမ တစ်ဝမ်းကွဲ တော်တော့ ကျွန်မက ဘာမလုပ်နဲ့ ညာမလုပ်နဲ့ဆိုရင် မလုပ်ပဲနေမဲ့ အကိုကြီးဆိုတာ သိနေတော့ ကျွန်မလဲ စိတ်ထဲရှိတဲ့အတိုင်း အဖုတ်လေး ယွရင် ယွသလို ထင်တိုင်း လုပ်ပြနေတာပေါ့။
ဟုတ်တယ်လေ တစ်စိမ်းရည်းစားကမှ အတင်းဖက်ပြီး အတင်းလိုးနေဦးမှာ။ ကိုကြီးက အဲလို ဘယ်တော့မှ မလုပ်ဘူးဆိုတာ မောင်နှမဝမ်းကွဲအသိနဲ့ သိနေတာပေါ့။ အဲဒါကြောင့်ပဲ ကျွန်မလဲ စိတ်ရှိတိုင်း အဖုတ်လေးယားတိုင်း လုပ်ပြနေလိုက်တာ။
တစ်နေ့ကြတော့ အိမ်မှာ လူတွေ မရှိတုန်း ကိုကြီးရောက်လာပါတယ်။ ရောက်လာတော့ ခါတိုင်းလိုပဲ ပါးလေးကို နမ်းမယ်လုပ်တော့ ပါးကိုနမ်းတာ မဟုတ်ပဲ နှုတ်ခမ်းလေးကို အနမ်းခံချင်နေတဲ့ ကျွန်မက မျက်နာလေးကို မော့ထားပြီး မျက်လုံးလေး မှိတ်ပေးလိုက်ပါတယ်။ နှုတ်ခမ်းလေးတွေတော့ ခပ်ဟဟလေး လုပ်ပေးထားလိုက်ပါတယ်။
ကျွန်မ ဆန္ဒကို သိတဲ့ ကိုကြီးကလဲ အချိန်မဆိုင်းပါဘူး။ သူ့ရဲ့ နှုတ်ခမ်းတွေနဲ့ ကျွန်မကို နမ်းလာပါတယ်။ အပေါ်နှုတ်ခမ်းလေးကို စုပ်လိုက်တော့ ကျွန်မလဲ အလိုက်သင့်ပဲ ကိုကြီးရဲ့ အောက်နှုတ်ခမ်းကို စုပ်လိုက်ပါတယ်။ ပြီးတော့ ကျွန်မရဲ့ နှုတ်ခမ်းနှစ်လွှာထဲကို ကိုကြီးရဲ့ လျှာက တိုးဝင်လာပါတယ်။ ဝင်လာတဲ့ လျှာနဲ့ ကျွန်မရဲ့ လျှာလေးနဲ့ ထိတွေ့လိုက်မိပြီဆိုရင်ပဲ ခံစားလိုက်ရတဲ့ အရသာက ပြောမပြတတ်လောက်အောင်ကို ကောင်းပါတယ်။ တကိုယ်လုံးကို သိမ့်သိမ့်တုန်နေအောင်ကို ခံစားနေရပါတယ်။ လေထဲမှာ လွင့်မျောနေသလိုပါပဲ။
ခံစားနေရတဲ့ အရသာတွေကို တိုးပြီး ခံစားချင်တာကြောင့် ကျွန်မရဲ့ လျှာလေးကို ကိုကြီးရဲ့ လျှာနဲ့ ပြန်ပြီး ထိုးပွတ်နေမိပါတယ်။ လျှာချင်း ထိတွေ့နေရတဲ့ အရသာက အရမ်းကောင်းလွန်းလို့ ဘာကိုမှ သတိမရတော့ပါဘူး။ ကျွန်မသိတာက ကိုကြီးလျှာနဲ့ ကျွန်မလျှာ ထိတွေ့ပြီး စုပ်နေရဖို့ပါပဲ။ ကိုကြီးရဲ့ အနမ်းတွေကြောင့် မူးယစ် ရီဝေနေတုန်း ကျွန်မ နို့တွေကို ကိုကြီးက အင်္ကျီပေါ်ကနေ ကိုင်လာပါတယ်။ ပြီးတော့ အင်္ကျီလေးအောက်ကို ဝင်လာပြီး ဘော်လီ လေးအောက်ကို ဝင်လာဖို့ ကြိုးစားနေပါတယ်။
ကျွန်မလဲ ကိုကြီးကို ချစ်တဲ့ စိတ်တွေရော အဖုတ်လေးထဲက တစ်ယွယွ ဖြစ်လာတာရောကြောင့် အင်္ကျီကိုရော ဘော်လီလေးကိုပါ လှန်ပေးလိုက်ပါတယ်။ နို့လေးတွေ ပေါ်လာတာနဲ့ ကိုကြီးက ကျွန်မနို့တွေကို လက်နဲ့ ဆုပ်နယ်ပါတော့တယ်။ နို့သီးလေးတွေကို ချေရင်း နို့လေးတစ်လုံး ဆွဲစို့လိုက်ပါတယ်။ နို့လေးတစ်ဖက်ကို အစို့ခံရင်း တစ်ဖက်က နို့သီးလေးကို အချေခံနေရတာက အရမ်းကောင်းတာပဲရှင်။
ခဏနေတော့ ကိုကြီးလက်တွေက ကျွန်မရဲ့ ထဘီလေးကို ဖြေပြီး အတွင်းခံလေးထဲကို ဝင်လာပါတယ်။ ကိုကြီး လုပ်ပေးတာတွေကြောင့် အရမ်းကို စိတ်တွေထနေတဲ့ ကျွန်မ အဖုတ်က စောက်ရည်ကြည်တွေ ထွက်နေပါတယ်။ စောက်ရည်တွေ စိုအိနေတဲ့ အဖုတ်ကို ကိုကြီးက ကိုင်ပွတ်ပြီး စောက်စိလေးကို ဆွပေးတော့ အရမ်းကို ကောင်းလိုက်တာရှင်။
မကြာဘူး ကိုကြီး လက်ညှိုးက အဖုတ်ထဲကို ဝင်လာပါတယ်။ စောက်ရည်ကြည်တွေ ထွက်နေတာဆိုတော့ လက်ညှိုးက အသာပဲ ဝင်သွားပါတယ်။ ဝင်သွားပြီးတာနဲ့ ပြန်ထုတ် ပြန်သွင်း လုပ်ပေးနေတော့ ကောင်းလွန်းလို့ ကျွန်မတစ်ကိုယ်လုံး အားမရှိတော့လို့ ကိုကြီး ရင်ခွင်ထဲကို လှချလိုက်ရပါတယ်။
ကိုကြီးကတော့ ကျွန်မ ထဘီလေးကို လှန်တင်ပြီး အတွင်းခံထဲကနေ လုပ်နေရတာ အားမရလို့ ဘောင်းဘီလေးကို ဆွဲချွတ်လိုက်ပါတယ်။ ကျွန်မလဲ ကိုကြီး လုပ်သမျှကို အလိုက်သင့်လေး နေပေးရင်း ပေါင်လေးတွေကို ကားပေးထားလိုက်ပါတယ်။ ကိုကြီးက ကျွန်မကို အောက်မှာ လှဲခိုင်းပြီး ပေါင်ကြားထဲကို ဝင်လိုက်ပါတယ်။
ကျွန်မ သိလိုက်ပါပြီ ကိုကြီးက ကျွန်မ အဖုတ်ကို ယက်ပေးတော့မယ်ဆိုတာ။ အဖုတ်က မနေနိုင်တော့လောက်ကို ယားနေ ယွနေပေမဲ့ အကိုတစ်ဝမ်းကွဲကို စောက်ရည်တွေ စိုရွှဲနေတဲ့ အဖုတ်ကို ယက်မှာတော့ အားနာမိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့လဲ အဲလိုအောက်မေ့နေတုန်း ပေါင်ကြားကို ကိုကြီးခေါင်းက ရောက်လာပြီး လျှာလေးနဲ့ အဖုတ်အကွဲကြောင်းလေးကို ယက်လိုက်တဲ့ အခါမှာတော့ ကျွန်မဖင်လေး ကော့တက်သွားပြီး မျက်လုံးလေးတွေ မှိတ်ကျသွားတော့တယ်။
ကိုကြီးလျှာလေးက ပေးတဲ့ အရသာတွေက ကောင်းလွန်းတော့ ခံစားနေရတဲ့ အရသာပေါ်မှာပဲ စိတ်ကရောက်သွားတယ်။ ကောင်းလွန်းတဲ့ အရသာတွေကြောင့် ကျွန်မလဲ သတိလက်လွတ်နဲ့ ကိုကြီးခေါင်းက ဆံပင်တွေကို ဆွဲပြီး အဖုတ်နဲ့ တအားကပ်ထားလိုက်မိပါတယ်။ အကွဲကြောင်းထိပ်က စောက်စိလေးကို လျှာနဲ့ထိုးကော်ပြီး ယက်လိုက်ရင် ဖင်လေး ကော့တက်သွားရပါတယ်။ စောက်စိလေးကို ယက်နေရင်း လက်နဲ့ အဖုတ်ထဲကို ထိုးပေးနေတော့ တစ်ကိုယ်လုံးကို ကော့ပြန်နေအောင်ကို ကောင်းတာပါပဲရှင်။
ကိုကြီးရဲ့ လျှာနဲ့ ယက်ပေးနေတာရော လက်နဲ့ထိုးပေးနေတာတွေရောကြောင့် ကျွန်မလဲ ကိုကြီး ဆံပင်တွေကိုပဲ အတင်းဆွဲပြီး ယက်ပေးဖို့ ပြောနေမိပါတော့တယ်။
“အားး… ကောင်းလိုက်တာ ကိုကြီးရယ်…. ယက်ယက်…. ညီမလေး အဖုတ်ကို တအားယက်ပေး…. အစိလေးရော စုပ်ပေး….. အားးး….. ကောင်းတယ်…. ညီမလေး မနေနိုင်တော့ဘူး…. အဖုတ်ထဲက တအားကောင်းနေပြီ…. ပြီးတော့မယ်….. ညီမလေး ပြီးတော့…. ကိုကြီးးးး အားးးး……”
ကျွန်မလဲ အဖုတ်ထဲက အရမ်းကောင်းတဲ့ ခံစားမှုတွေကြောင့် ကိုကြီးကိုပဲ တစာစာနဲ့ တောင်းဆိုမိနေတော့တယ်။ ခဏနေတော့ တစ်ကိုယ်လုံး လေထဲလွင့်မျောသွားသလို ခံစားလိုက်ရပြီး အဖုတ်ထဲကနေ စောက်ရည်တွေ ထွက်ကုန်ပါတယ်။
“အားးး ကိုကြီးးးး အားးး…. ညီမလေးးး ကောင်းးးလိုက်…တာ… အားးး ကိုကြီးရေ အားးး ညီမလေးပြီးပြီ..… ကိုကြီးရဲ့ အောင်မလေးးး ကောင်းလိုက်တာ ကိုကြီးရယ်…. ညီမလေး အဖုတ်ထဲက ကောင်းလိုက်တာ ဟင်းးးးး……”
စောက်ရည်တွေ ထွက်ပြီး ပြီးသွားတော့ ကျွန်မတစ်ကိုယ်လုံး နှုံးသွားတာပဲရှင်။ ကိုကြီးကိုလဲ ချစ်သထက် ချစ်သွားမိပါတယ်။ ကျွန်မလဲ ကိုကြီးကို ကောင်းစေချင်တာကြောင့် ပုဆိုးထဲကနေ ထောင်ထနေတဲ့ လီးကြီးကို လှမ်းကိုင်လိုက်ပါတယ်။ကိုကြီးရဲ့ တောင်နေတဲ့ လီးကြီးက အားရစရာကြီးပါရှင်။ ကျွန်မလဲ ကိုကြီးပုဆိုးကို ဆွဲချွတ်ပြီး တောင်နေတဲ့ လီးကြီးကို နှုတ်ခမ်းလေးတွေနဲ့ စုပ်ပေးလိုက်ပါတယ်။
တစ်ခါမှ လီးမစုပ်ဘူးပေမဲ့ ကိုကြီးကို ကောင်းစေချင်တာကြောင့် လီးထိပ်ဖူးကြီးကို လျှာလေးနဲ့ ယက်ပေးရင်း ရေခဲချောင်းစုပ်သလို တစ်ပျွတ်ပျွတ်နဲ့ စုပ်နေလိုက်ပါတယ်။ ကိုကြီးကတော့ ကျွန်မနို့လေးတွေကို ကိုင်နေပြီး စုပ်ပေးတာကို ခံနေပါတယ်။ ကျွန်မလဲ ကြားဖူး ဖတ်ဖူးထားတဲ့ထဲက အတိုင်းကို ကြီးလီးကြီးကို အစွမ်းကုန် ပြုစုပေးနေလိုက်ပါတယ်။ မကြာခင်မှာပဲ ကိုကြီးရဲ့ မပီမသ အသံကို ကြားလိုက်ရပြီး လီးကြီးထဲကနေ သုတ်ရည်တွေ ထောင်ပန်းလာပါတယ်။
ကိုကြီး အပေါ်ကို ချစ်တဲ့ စိတ်တွေကြောင့်ပဲ ထွက်လာသမျှ လရည်တွေကို မျိုချပစ်လိုက်ပါတယ်။ဟုတ်တယ်လေ ကိုကြီးလဲ ကျွန်မအဖုတ်ထဲကနေထွက်တဲ့ စောက်ရည်တွေကို ယက်ပေးရင်း မြိုချသေးတာပဲ ကျွန်မလဲကိုကြီး လရည်တွေကို မြိုချရမှာပေါ့။ စိတ်ထဲမှာလဲ အရမ်းပဲ ကြည်နူး ပျော်ရွှင်နေပါတယ်။ ချစ်ရတဲ့ ကိုကြီးနဲ့ အခုလို နေရတာက ကျွန်မ အတွက်တော့ အလွန်ကို ကျေနပ်စရာ ဖြစ်နေပါတယ်။ ကိုကြီးရဲ့ ရင်ခွင်ထဲမှာ မှီနေရင်း ကိုကြီးဖက်ထားတာကို ပြုံးပြုံးလေး နေနေလိုက်ပါတယ်။
အဲဒီနေ့ရဲ့ နောက်ရက်တွေမှာတော့ ကိုကြီးနဲ့ ကျွန်မအတွက် တကယ့်ကို သာယာတဲ့ နေ့လေးတွေပါပဲ။လူလစ်တာနဲ့ ကိုကြီးက နမ်းပြီး အဖုတ်လေးကို ယက်ပေးပါတယ်။ ကျွန်မကလဲ ကိုကြီးရဲ့ လီးကြီးကို ပါးစပ်လေးနဲ့ မဆန့်မပြဲ စုပ်ပေးပါတယ်။ ညရောက်ရင်လဲ လူကြီးတွေ အိပ်တာနဲ့ ကျွန်မတို့က အိမ်အောက်မှာ ခိုးတွေ့ကြပါတယ်။
ညဆိုတော့ လွတ်လပ်တာကြောင့် ကျွန်မလဲ ထဘီလေးကို ချွတ်ပြီး ကိုကြီးရဲ့ မျက်နာပေါ်ကို တက်ထိုင်ပြီး ကိုကြီးရဲ့ မျက်နာကို ကျွန်မ အဖုတ်နဲ့ အားရပါးရ ပွတ်နေလိုက်ပါတယ်။ တခါတလေကြရင်လဲ ကိုကြီးက ကျွန်မကို ဖင်ကုန်းခိုင်းပြီး အဖုတ်ကို နောက်ကနေ ယက်ပေးပါတယ်။ ဖင်လေးကို ဖြဲပြီး ဖင်ပေါက်လေးကို ကိုကြီးက ယက်ပေးရင်များ အရမ်းကို ကောင်းတာပါပဲရှင်။
ဖင်ပေါက်လေးကို အယက်ခံနေရင်း အဖုတ်လေးကို လက်နဲ့ အလိုးခံနေရတာက အရမ်းကို ကောင်းလွန်းလို့ ကျွန်မလဲ စောက်ရည်တွေ အိုင်ထွန်းနေအောင်ကို ထွက်ပြီး ပြီးနေရပါတယ်။ မောင်နှမ ဝမ်းကွဲချင်းဆိုတဲ့ အသိကလဲ ကျွန်မကိုပိုပြီး စိတ်တွေ ထစေပါတယ်။ ဟုတ်တယ်လေ ကိုယ့်အစ်ကို ဝမ်းကွဲကို အဖုတ်ယက်ခိုင်းတာ စောက်ရည်တွေ တိုက်ရတာက ဘာနဲ့မှ မတူတဲ့ ခံစားမှုပါပဲရှင်။ ကိုကြီးရဲ့ လီးကြီးကိုလဲ ချစ်လိုက်ကို မပြောပါနဲ့တော့ရှင် စုပ်မ၀ ကိုင်မဝအောင်ကို ဖြစ်နေရပါတယ်။
ကိုကြီးရဲ့ လီးကြီးကိုနေ့တိုင်း ကိုင်နေရ စုပ်နေရတော့ ကြာလာတော့ ကျွန်မ အားမရတော့ပါဘူး။ အဲဒီလီးကြီးကို ကျွန်မ အဖုတ်ထဲ သွင်းပြီး အလိုးခံချင်လာပါတယ်။ လီးကြီးကကြီးတော့ အလိုးခံလိုက်ရရင် အရမ်းကောင်းမှာပဲလို့ တွေးမိလာတော့ အလိုးခံချင်လာတာပေါ့။ ဒါနဲ့ ကိုကြီးကို လိုးပေးဖို့ ပြောတော့ ကိုကြီးက ကျွန်မကို ဆေးကဒ်လေးတစ်ကဒ်ပေးပါတယ်။ ဘာဆေးလဲမေးတော့ ဗိုက်မကြီးအောင်သောက်တဲ့ ဆေးတဲ့လေ။ ကျွန်မလဲ ပျော်သွားတာပေါ့။
ဆေးသောက်ပြီးတဲ့ ညရောက်လာတော့ ကိုကြီး လိုးတာကို ခံရတော့မယ်ဆိုတာ သိနေတော့ ကျွန်မလေ ရင်တွေခုန်လိုက်တာရှင်။ ည ၁၁ နာရီကျော်လောက်ကျတော့ ကိုကြီးနဲ့ တွေ့နေကြ နေရာမှာ တွေ့ကြပါတယ်။ တွေ့ကြတာနဲ့ ဖက်ကြ နမ်းကြပေါ့ရှင်။ ကျွန်မ နှုတ်ခမ်းလေးတွေကို ကိုကြီးက စုပ်ပြီး ကျွန်မ လျှာလေးကိုလဲ ဆွဲစုပ်နေတာပေါ့။
ပြောရဦးမယ် ယောက်ျား တစ်ယောက်နဲ့ နမ်းရတာက အင်မတန်မှကို ကောင်းလွန်းလှပါတယ်။နှုတ်ခမ်းချင်းတေ့ပြီး လျှာချင်း ပွတ်ဆွဲနေရရင် တစ်ကိုယ်လုံးကို လေထဲမျောနေသလိုပါပဲ။ တစ်ကိုယ်လုံးကို သိမ့်သိမ့်တုန်နေအောင်ကို ခံစားရတဲ့ အရသာတွေက ကောင်းလွန်းတော့ အဲဒီအရသာကို လက်မလွတ်ချင်လောက်ပါပဲရှင်။ အနမ်းခံနေရင်း နို့တွေကို အကိုင်ခံနေရတာကလဲ ဖီးတမျိုးပါပဲ။
ကိုကြီးနဲ့ ကျွန်မလဲ အဲဒီညက အဆုံးစွန်သောအရသာတွေ ခံစားကြဖို့အတွက် အဝတ်တွေ အကုန် ချွတ်လိုက်ကြပါတယ်။ ပြီးတာနဲ့ ကျွန်မလဲ ဒူးထောင်ပြီး ပေါင်တွေကို အစွမ်းကုန် ကားပေးလိုက်ပါတယ် ။ပေါင်တွေ ကားပေးလိုက်တော့ ကိုကြီးက ကျွန်မအဖုတ်ကို ယက်တော့တာပေါ့။
စောက်ဖုတ် နှုတ်ခမ်းသားတွေကို ဖြဲပြီး စောက်စိလေးကို စုပ်နေတာများ ကောင်းလိုက်တာရှင်။ အကွဲကြောင်းလေးကို လျှာနဲ့ ယက်ပေးလိုက် အစိလေးကို စုပ်လိုက် လုပ်နေတော့ စောက်ရည်တွေက တသွင်သွင်နဲ့ ထွက်နေရပါတယ်။ ကိုကြီးရဲ့ လျှာကြီးက ကျွန်မ အဖုတ်အကွဲကြောင်းလေးကို ပင့်ယက်လိုက်ရင်များ ကျွန်မလေ ဖင်လေးကို ကြွတက်နေတာပဲရှင်။ စောက်ရည်တွေလဲ အကြိမ်ကြိမ်ကို ထွက်ပြီး ပြီးနေရပါတယ်။
ဒါပေမဲ့လဲ ကိုကြီးက ဆက်ပြီး ယက်နေတာကြောင့် ပြီးသွားပေမဲ့ ခံချင်တဲ့ စိတ်ကတော့ လျော့မသွားပါဘူး။ နောက်ဆုံးတော့ ကျွန်မကပဲ တော်ပါတော့ ကိုကြီးရယ် ညီမလေးကို ကိုကြီး လီးကြီးနဲ့ လိုးပေးပါတော့လို့ ပြောလိုက်ရပါတယ်။ အဲဒီကြမှပဲ ကိုကြီးက ကျွန်မ ပေါင်ကြားထဲကို ဝင်လာပါတယ်။ ပြီးတော့ ကျွန်မ အဖုတ်လေးကို ဖြဲပြီး လီးထိပ်ဖူးကြီးကို ကျွန်မတို့ မိန်းကလေးတွေ အလိုးခံတဲ့ အပေါက်ဝလေးမှာ တေ့လိုက်ပါတယ်။ လီးထိပ်ဖူးကြီး စောက်ခေါင်း အ၀လေးမှာ တေ့လာတာနဲ့ ကျွန်မလဲ အံလေးကျိတ်ပြီး ကိုကြီးရဲ့ လီးကြီး အဖုတ်ထဲ ဝင်လာမှာကို စောင့်နေလိုက်ပါတယ်။
ဟင့်…ကိုကြီးလေ သူ့လီးကြီးကို မသွင်းသေးပဲ အကွဲကြောင်းထိပ်က စောက်စိလေးကို ထိပ်ဖူးကြီးနဲ့ ထိုးဆွနေပြန်ပါတယ်။ ကျွန်မလဲ အလိုးခံချင်စိတ်က တအားများနေတော့ ကိုကြီးလီးကြီးကို ကျွန်မလက်လေးနဲ့ လှမ်းကိုင်ပြီး အဖုတ်အဝမှာတေ့ပြီး ဖင်လေးကို အောက်ကနေ ကော့တင်လိုက်ပါတယ်။ ခံချင်နေတဲ့ စိတ်တွေကြောင့် အဖုတ်ကနေ စောက်ရည်တွေက ထွက်နေတော့ ကော့လိုက်တာနဲ့ လီးထိပ်ဖူးကြီးက ဝင်သွားပါတယ်။
ကိုကြီးက နေ့တိုင်းလိုလို လက်နဲ့ ထိုးနေတာရော ကျွန်မကလဲ တစ်ကိုယ်ရည် အာသာဖြေလာတာ ကြာတာက တစ်ကြောင်းကြောင့် ကျွန်မအဖုတ်က အပေါက်လေးက နဲနဲကျယ်နေပါတယ်။ အဲဒါကြောင့်လဲ လီးထိပ်ဖူးကြီးက ဝင်သွားတာပါ။ ကျွန်မက ဖင်လေးကော့ပြီး လီးကြီးကို သွင်းယူလိုက်တော့ ကိုကြီးကလဲ အလိုက်တသိနဲ့ လီးကြီးကို တဖြည်းဖြည်းနဲ့ သွင်းပေးပါတယ်။
လီးကြီး ကျွန်မအဖုတ်ထဲ ဝင်လာလေလေ ကျွန်မဖင်လေးက ကော့တက်လေ ဖြစ်နေရပါတယ်။ ကိုကြီးကလီးကြီးကို ပြန်ဆွဲထုတ်လိုက်တော့လဲ အဖုတ်အတွင်းသား နုနုလေးတွေကို ထိပ်ဖူးကြီးဘေးက ဒစ်ကြီးက ပွတ်ဆွဲသွားတော့ ကျွန်မရင်ထဲက အူအသဲတွေကို ဆွဲထုတ်လိုက်သလိုပါပဲရှင်။ အဲဒီနောက်မှာတော့ ကိုကြီးက သူ့လီးကြီးကို ဆော့ဆောင့်ပြီး ကျွန်မအဖုတ်ကို လိုးပါတော့တယ်။ ကောင်းလိုက်တာတော့ မပြောပါနဲ့တော့ရှင်။
အခု ကျွန်မကို လိုးနေတာက ကျွန်မဒေါ်ကြီးရဲ့သား ကျွန်မအစ်ကို တစ်ဝမ်းကွဲဆိုတာ သိနေရတော့ စိတ်တွေကလဲ အရမ်းကို လှုပ်ရှားနေရပါတယ်။ မောင်နှမ ဝမ်းကွဲချင်း လိုးနေကြတာဆိုတဲ့ အသိက ကျွန်မကိုပိုပြီး အလိုးခံချင်စိတ်တွေ ဖြစ်နေစေပါတယ်။ အလွန်မင်း တက်ကြွနေတဲ့ စိတ်တွေကြောင့် ကျွန်မလဲ ပေါင်တွေကို အစွမ်းကုန်ကားပြီး ဖင်လေးကော့ပြီး အလိုးခံနေလိုက်ပါတယ်။ အပေါ်ကနေ ဆောင့်လိုးနေတဲ့ ကိုကြီးကိုလဲ ဖက်ထားရင်း လိုးပေဖို့ပဲ တောင်းဆိုမိနေပါတယ်။
“အား…ကိုကြီး လိုး လိုး ညီမလေး အဖုတ်ကို တအားလိုး အားးး ညီမလေးကို မညှာနဲ့ ကိုကြီးရဲ့ ညီမတစ်ဝမ်းကွဲကို တအားလိုးပါ အားးး ကောင်းလိုက်တာကိုကြီးရယ်”
“ကိုကြီးလဲ ကောင်းလိုက်တာကွာ မိစိမ်း နင့်အဖုတ်က တအားလိုးလို့ ကောင်းတာပဲ မိစိမ်းကို ကိုကြီးလိုးချင်နေတာ ကြာပြီ အခုမှပဲ လိုးရတော့တယ်”
“လိုးပါ ကိုကြီးရယ် စိတ်ရှိသလောက်သာ လိုးပစ်လိုက်စမ်းပါ ညီမလေးလဲ ကိုကြီး လိုးတာကို ခံချင်နေတာ ကြာပါပီရှင်”
ကျွန်မက ပြောလိုက်တော့ ကိုကြီးလေ သူ့လီးကြီးကို ဆွဲထုတ်ပြီး ကျွန်မအဖုတ်ကို ဆောင့်ဆောင့်ပြီး လိုးပါတော့တယ်။ အားရလိုက်တာကို မပြောပါနဲ့တော့ရှင်။ စောက်ရည်တွေကလဲ အဖုတ်ထဲကနေ ပေါင်တွေ အထိကို စီးကျနေပါတယ်။ ကိုကြီးရဲ့ လီးကြီးနဲ့ အလိုးခံနေတဲ့ အရသာတွေက ကောင်းလွန်းတော့ ကျွန်မလဲ စိတ်ရှိသလိုကို အော်ပြီး အလိုးခံနေလိုက်ပါတယ်။ ကိုကြီးရဲ့ ပြင်းထန်တဲ့ လိုးဆောင့်မှုတွေကြောင့် ကျွန်မအဖုတ်ထဲမှာ အီဆိမ့်နေအောင်ကို ကောင်းနေရပါတယ်။ မကြာခင်မှာပဲ ကျွန်မပြီးချင်လာပါတယ်။ ဒါနဲ့ပဲ ကိုကြီးကို ပြောလိုက်မိပါတယ်။
“ကိုကြီး လိုး လိုး ညီမလေးပြီးတော့မယ် အားးးးကောင်းတယ် ကိုကြီးရေ… လိုးပါ ညီမလေး အဖုတ်ကို တအားလိုးပါ အားးးကိုကြီးးးးရေ….အားးးး”
“ကိုကြီးလဲ ပြီးတော့မယ် မိစိမ်း တူတူပြီးကြမယ် မိစိမ်း အဖုတ်ထဲကို ကိုကြီးရဲ့ လီးရည်တွေ ပန်းထည့်ပေးမယ်”
“ဟုတ်ကိုကြီး လီးရည်တွေ ပန်းထည့်ပေး အားးး ကိုကြီးးးး ညီမလေး ပြီးတော့မယ်…အားးး ကိုကြီးရေ ညီမလေး မရတော့ဘူး အဖုတ်ထဲက အရမ်းကောင်းနေပြီ အားးး ကိုကြီးးး လီးကြီးနဲ့ တအားလိုးပေးးး အားးး ကောင်းလိုက်တာ အလိုးခံရတာ ကောင်းလိုက်တာ အားးး ကိုကြီးရေ… ညီမလေးးး အားးး ညီမလေးးး ပြီးတော့မယ် အားးး ကိုကြီးရေ… အားးးညီမလေး ပြီးပြီ ကိုကြီးရဲ့ အားးး ကောင်းလိုက်တာ ကိုကြီးရယ်….”
ကိုကြီးက သူ့လီးကြီးနဲ့ တအားဆောင့်ပြီး လိုးပေးမှုကြောင့် ကျွန်မ တစ်ကိုယ်လုံးကို ကော့ပျံပြီး ပြီး သွားရပါတယ်။ စောက်ရည်တွေကလဲ ထွက်တာကို မပြောပါနဲ့တော့ရှင်။ အရင်က ကျွန်မဟာကျွန်မ လက်နဲ့ လုပ်တာနဲ့ ကိုကြီးရဲ့ လီးကြီးနဲ့ အလိုးခံရတာက ဘာမှကို မဆိုင်အောင်ကို ကောင်းလှပါတယ်ရှင်။ အလိုးခံရလို့ ပြီးသွားတဲ့ ကောင်းမွန်တဲ့ အရသာတွေကို ခံစားနေစဉ်မှာပဲ ကိုကြီးရဲ့ လီးကြီးကနေ လီးရည်တွေ ပန်းထွက်လာပါတယ်။ အလိုးခံရလို့ ကောင်းတဲ့ အရသာတွေကို ခံစားနေတုန်းမှာပဲ အဖုတ်ထဲကို လီးရည်တွေနဲ့ အပန်းခံလိုက်ရတော့ စောက်ဖုတ်ထဲကို နွေးသွားတာပဲရှင်။
ကိုကြီးရဲ့ လီးကြီးနဲ့ အလိုးခံလိုက်ရတဲ့ နောက်ပိုင်းမှာတော့ ကျွန်မလေ ကိုကြီးနဲ့ မခွဲနိုင်အောင်ကို ဖြစ်သွားရပါတယ်။ အချိန်တိုင်းလိုလို ကိုကြီး လိုးတာကို ခံချင်နေပါတယ်။ ကိုကြီးလီးကြီးကို အချိန်ပြည့် ကိုင်နေချင်ပါတယ်။ မာပြီး တောင်နေတဲ့ လီးကြီးကို စုပ်နေချင်ပါတယ်။
လီးဆိုတာကို လက်တွေ့ မမြင်ဖူးပေမဲ့ လိုင်းပေါ်က အပုံတွေထဲမှာတော့ မြင်ဖူးပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အဲဒီမြင်ဖူးတဲ့ လီးတွေနဲ့ ကိုကြီးလီးကြီးက ဘာမှကိုမဆိုင်ပါဘူး။ ကိုကြီးလီးကြီးက အရမ်းကြီးတာ ရည်လဲရှည်တယ်။ တုပ်တုပ်မာမာကြီး လီးဒစ်ကြီးကလဲ ဖူးထနေတာပါပဲရှင်။ အစက အဲလောက်ကြီးတဲ့ လီးကြီးကို ကျွန်မအဖုတ်ထဲ သွင်းလို့မရဘူးလို့ ထင်ခဲ့တာ လက်တွေ့ အလိုးခံကြည့်လိုက်တော့မှ မဝင်ဘူးဆိုတာ မရှိမှန်း သိသွားရပါတယ်။
ကိုကြီးလီးကြီး ကျွန်မအဖုတ်ထဲကို ဝင်လာရင် တင်းတင်းဆို့ဆို့ကြီးနဲ့ ဒစ်ကြီးက စောက်ခေါင်းအတွင်းသား နုနုလေးတွေကို ပွတ်ဆွဲနေတော့ အရမ်းခံလို့ ကောင်းတာပါပဲ။ အဲဒါကြောင့်လဲ အမေတို့ လစ်တာနဲ ကျွန်မလဲ ကိုကြီးနဲ့ လိုးခဲ့ပါတယ်။ တခါတလေများဆိုရင် အိမ်ကလူတွေ ဘေးမှာပဲ ကျွန်မကထိုင်ပြီး ကိုကြီးကို ထဘီအောက်စလွှတ်ပြတာလေ။ အမေတို့ကတော့ မသိဘူး မမြင်ဘူးပေါ့ရှင်။ အဲလိုအခါမျိုးဆိုရင် ကျွန်မအဖုတ်ကိုကြည့်ပြီး ကိုကြီး လီးကြီးတောင်နေမယ်ဆိုတာ ကျွန်မသိတာပေါ့။
လူတွေကြားမှာ ကိုကြီးကို အဖုတ် လှန်ပြရတာက စိတ်ထဲမှာ အရမ်းကို ဖီးကြွတာပဲ။ တခါတလေဆို ကျွန်မက ထဘီအောက်စလွှတ်ပြီး အဖုတ်နှုတ်ခမ်းသားလေးတွေပါ ဖြဲပြတာလေ အစိလေးလဲ ပွတ်ပြတာပဲ။ အမေတို့ကတော့ ကျွန်မတို့ကို မောင်နှမ တစ်ဝမ်းတွေပဲဆိုပြီး သတိမထားမိကြဘူးလေ။ ဒါပေမဲ့ အဲဒီမောင်နှတစ်ဝမ်းကွဲက လိုးပြီးနေကြပြီဆိုတာတော့ မသိကြဘူးပေါ့ရှင်။
တခါတလေကြ ကျွန်မ တွေးမိတယ် ရည်းစားထားပြီး အလိုးခံရင်တောင် ကိုကြီးနဲ့ အလိုးခံသလိုကောင်းမှာ မဟုတ်ဘူးလို့လေ။ ဘာလို့လဲဆိုရင် ကိုကြီးနဲ့ ကျွန်မ မောင်နှမ တစ်ဝမ်းကွဲချင်း လိုးနေကြတာဆိုတဲ့ အသိက ပိုပြီး စိတ်လာစေတာကြောင့်ပါ။မောင်နှမ တစ်ဝမ်းကွဲချင်း လိုးနေကြတယ်လို့ တွေးမိယုံနဲ့တင် ကျွန်မအဖုတ်ထဲက လှိုက်လှိုက်ပြီး ယားလာပါတယ် စောက်ရည်တွေ ထွက်လာနေရပါတယ်။
မောင်နှမ တစ်ဝမ်းကွဲချင်း လိုးရတဲ့ အရသာက ကောင်းလွန်းတော့ ကျွန်မနဲ့ ကိုကြီးလဲ လူလစ်တာနဲ့ လိုးကြတော့တာပေါ့။ အချိန်မရရင်တော့ ကျွန်မကကိုကြီး လီးကြီးကို ကိုင်ပြီး ဂွင်းထုပေး ကိုကြီးက ကျွန်မအဖုတ်ကို လက်နဲ့လိုးပေး လုပ်ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ ကျွန်မက အဖုတ်အယက်ခံရတာကို ပိုကြိုက်တော့ လူလစ်တာနဲ့ ထဘီကို လှန်ပြီး ကိုကြီးမျက်နာကို အဖုတ်နဲ့ ပွတ်လေ့ရှိပါတယ်။
ကိုကြီးကို အဖုတ်ယက်ခိုင်းရင် လွယ်အောင်ဆိုပြီး အတွင်းခံကိုတောင် သိပ်ပြီး မဝတ်တော့ပါဘူး။ ဒါမှလဲ လူလစ်တာနဲ့ ကိုကြီးကို ထိုင်ခိုင်းပြီး ကျွန်မက ကိုကြီး မျက်နာကို အဖုတ်နဲ့ ပွတ်လို့ရမှာလေ။ ကျွန်မက ထဘီလှန် ပေါင်တွေကားပြီး ကိုကြီးမျက်နာပေါ်ကို အဖုတ်တင်လိုက်ပြီဆိုရင် ကိုကြီးက သူ့လျှာကြီးကို ထုတ်ပြီး အဖုတ်ကို အောက်ကနေပင့်ပြီး ယက်ပေးတာလေ။ ပြီးသွားရင် စောက်ရည်တွေက အရမ်းထွက်တော့ ကိုကြီး ပါးစပ်ထဲကို ဝင်ကုန်တာပေါ့ အရမ်းကောင်းတာပါပဲရှင်။
ကိုကြီးမျက်နာဆိုရင် ကျွန်မ အဖုတ်က ထွတ်တဲ့ စောက်ရည်တွေကို ပေပွနေတာပါပဲ။ အဲလိုအခါမျိုးဆိုရင် ကျွန်မသိပ်ပြီး ကျေနပ်တာပဲ။ ကျွန်မထက်အသက်အများကြီး ကြီးတဲ့ အစ်ကို တစ်ဝမ်းကွဲကို ကျွန်မ အဖုတ်ထဲက ထွက်တဲ့ စောက်ရည်တွေကို တိုက်ရတာက စိတ်ထဲမှာ ကြက်သီးဖြန်းဖြန်းထအောင်ကို ခံစားရပါတယ်။
ဒီလိုနဲ့ပဲ မောင်နှမတစ်ဝမ်းကွဲတော်တဲ့ ကျွန်မနဲ့ကိုကြီးက နေ့စဉ်ရက်ဆက် ဆိုသလိုပဲ လူလစ်တာနဲ့ လိုးနေကြပါတယ်။ ရာသီလာတဲ့ ရက်တွေဆိုရင် ကျွန်မက ကိုကြီးလီးကြီးကို စုပ်ပေးပါတယ်။ အိမ်ကလူတွေ မလစ်လိုက်နဲ့ လစ်လိုက်တာနဲ့ ကျွန်မအဖုတ်ကို ကိုကြီးကို ယက်ခိုင်းပါတယ်။ ကျွန်မကလဲ ကိုကြီးလီးကြီးကိုစုပ်ပေး ကျွန်မအဖုတ်ကိုလဲ ကိုကြီးက ယက်ပေးနဲ့ သာယာတဲ့ ဘဝလေး ဖြစ်နေတော့တာပေါ့ရှင်။
ဖတ်ရှုကြိမ် စုစုပေါင်း : 15,471
← သမီး တစ်ယောက်ထဲလား